စင်ကာပူရောက် အိမ်ဖေါ်မလေး တယောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စင်ကာပူရောက် အိမ်ဖေါ်မလေး တယောက်
စင်ကာပူရောက် အိမ်ဖေါ်မလေး တယောက်
Posted by မိုခ်ိဳ on May 14, 2012 in Creative Writing, Short Story | 15 comments
စင်ကာပူမှာ အိမ်ဖေါ် အလုပ်လာလုပ်နေကြတဲ့ မိန်းကလေး အများစု က တော်တော် သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လစာလေး ၃၅ဝ ၊ ၄၀ဝ လောက် ပဲရကြပြီး ကိုယ်နဲ့ ဓလေ့ စရိုက် မတူ၊ နေထိုင်စားသောက်မှု မတူတဲ့ လူမျိုးခြား အိမ်ကြီးရှင် တွေရဲ့ မျက် နှာ ကို ကြည့် ပြီး သူများစိတ်တိုင်းကျ ထားရာနေ၊ ကြွေးတာစား၊ ခိုင်းတာလုပ် နဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို မပိုင်တဲ့ ဘဝမျိုးပါ။
ဒါပေမယ့် ကျမ အခု ရေး မယ့် ကောင်မလေးကတော့ ရိုက် ချင်စရာကောင်း ပါတယ်။ ကျမပြောတာ လွန်သလား၊ မလွန်ဘူးလား ဆိုတာ ဆက်သာ ဖတ်ကြည့် ပါတော့။
တနေ့ ကျမတို့နဲ့ မောင်နှမတွေလို ခင်နေတဲ့ မင်းမင်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေး နဲ့ ကျမတို့ မိသားစု ဆိုင်တဆိုင် မှာ ထိုင် နေတုန်း မင်းမင်း ရဲ့သူငယ်ချင်း တယောက် ရောက်လာပါတယ်။ သူတယောက် တည်း တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကောင်မလေး တယောက်လည်း ပါလာပါတယ်။ ကောင် မလေး ကို ကြည့် လိုက် တာနဲ့ အိမ်ဖေါ် မှန်း ကျမက တန်းသိပါတယ်။ ( ကျမက မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ကို မြင် ရုံနဲ့ အိမ်ဖေါ်၊ ကျောင်းသူ၊ S pass ,EP နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူ၊ အလုပ်မလုပ် တဲ့ အိမ်ရှင် မ စသည်ဖြင့်ခွဲ ခြား တတ်ပြီး အများအားဖြင့် မှန်တတ်ပါတယ်)
မင်းမင်း က သူ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားပြောနေ သလို သားသား တို့သားအဖ ကလည်း စားစရာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတော့ ကောင်မလေး ကြောင်နေမှာ စိုးလို့ ကျမပဲ သူ့ ကို စကားတွေ စပြောဖြစ်တယ်။ စကားပြောတာ နဲနဲ ဝဲပြီး တော်တော် သွက်သွက် လက်လက် ရှိတာ သတိထားမိတယ်။ ခဏနေ သူတို့ ထပြန်တော့မင်းမင်း က “ဟေ့ကောင် မင်းတို့ကြည့် ကျက် လည်းလုပ် အုံး ၊ တော်ကြာ သတင်းစာထဲ ပါလာမှ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း ဖြစ်နေအုံးမယ်” လို့ ပြောလိုက် တော့ သူ့ သူငယ်ချင်းကမျက်နှာ စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ “အေးဆေးပါကွာ” လို့ ပြန် ပြော သွားတာကြားလိုက် ပါတယ်။
မစပ်စု ကျမလည်း “ ဟဲ့ ဘာတွေ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း ဖြစ် စရာရှိလို့ လဲ “လို့ မေးလိုက် တော့ ဘယ်အချိန် ထဲက ပြောချင် နေမှန်းမသိတဲ့ မင်းမင်း က “အမရာ ဒီကောင်တွေ လုပ်ပေါက် က မလွယ်ဘူး “ လို့ အစချီပြီး ပြောပြ လို့ သိခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်မှန် ပါ။
အခု ပြန် သွားတဲ့ မင်းမင်း သူငယ်ချင်းက လူပြိုကြီးပါ။ ( လူပျိူကြီးမဟုတ်) ။ ထောက်ပံ့ ရမဲ့ မိသားစု မရှိသလို၊ မိဘ ကလည်း စားနိုင် သောက်နိုင် ဆိုတော့ ကိုယ့် ပိုက်ဆံ ကိုယ် သုံး ရုံပါပဲ။ အဲ ဒီတော့ခက်ပွေ ပွေ ရှုပ်ရှုပ်ပေါ့၊ S pass ,EP နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေ ကျတော့ ၁ယောက် ကနေ ၂ယောက် တပြိုင် တည်း တွဲရင် ပြသနာ ရှာတတ် တော့ သူက အိမ် ဖေါ် မိန်းကလေးတွေ နဲ့ ပဲ တွဲ လေ့ ရှိပါသတဲ့။
အိမ် ဖေါ် မိန်းကလေးတွေ က အပတ်တိုင်း ထွက်ခွင့် မရပဲ တချို့ က ၂ပတ် ၁ ရက်၊ တချို့ က ၁လမှ ၁ရက် ပဲ ထွက်ခွင့် ရပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီလူ က သူ အလုပ် ပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေ ဆိုရင် အဲဒီနေ့ အပြင် ထွက်ခွင့် ရတဲ့ မိန်းကလေးတယောက် နဲ့ ချိန်းပြီး အပြင်ထွက် လျှောက်လည်၊ စားသောက်၊ မိန်းကလေး လိုချင် တာလေး နည်းနည်းပါးပါး ဝယ်ပေး၊ ပြီးရင် သူ့ အခန်း ကို ခေါ်လာ ၊ အခန်းဖေါ် ကို ခဏ ရှောင်ခိုင်း ပြီး ဘာညာ ဘာညာ ပေါ့။ တကယ်တော့ အခန်းဖေါ် ဆိုတာလည်း သက်သက် ရှောင်ခိုင်း စရာတောင် မလိုပါဘူး၊ ယောက်ျားလေးတွေ က ပိတ်ရက်ဆို အိမ်မှ မကပ်တာ။
ဒီလို နေနေရာ ကနေ ခု ကောင်မလေးနဲ့ ကျတော့ ပုံစံ တမျိုး ပြောင်း သွားပါ သတဲ့။ ကောင်မလေးက သွက်သွက် လက်လက်ချက်ချက်ချာချာ ရှိတဲ့ အပြင် E လိုလည်း နည်းနည်းပါးပါး ပြောတတ်တော့ အိမ်ရှင် တွေ က သဘောကျ ပြီး အစစ ယုံကြည် မျက်နှာ လွှဲပါသတဲ့။ ယုံကြည်မှု ကို အလွဲ သုံးစားလုပ်တဲ့ ကောင်မလေးက အိမ်ရှင် မိသားစု ၁ပတ် ၊ ၁ဝရက် ခရီး သွားတဲ့ အခါ မျိုးမှာ သူ့ဘဲ ၊ မင်းမင်း သူငယ်ချင်း ကို အိမ်ပေါ်ခေါ်တင် ထားပါသတဲ့။ facility အပြည့် နဲ့ ကွန်ဒို အိမ်ခန်း ကြီးမှာ အိမ်ရှင် မိသားစု ပြန်မလာမချင်း ညားကာစ ဇနီးမောင်နှံ တွေ အလား မိုးမမြင် လေမမြင် ပျော် ရွှင်စွာ နေထိုင် ကြပါသတဲ့။
အိမ်ရှင်တွေ ပြန်လာတော့လည်း သူတို့ အရှိန် သူတို့ မသတ်နိုင် ပဲ ညဘက် အိမ်ရှင်တွေ အိပ် ပျော် ပြီဆို ကောင် မလေးက ငပွေ ကောင် ကို ဖုန်းဆတ် ခေါ် ပြီး သူ့ အခန်းမှာ သိပ်ပြီး မနက် အိမ်ရှင်တွေ မနိုးခင် ထပြန်ခိုင်း ပါသတဲ့။ ဒီကောင် အဲလို လုပ် နေတာ သိတဲ့ မင်းမင်း တို့ သူငယ်ချင်းတွေ က တားကြပေမယ့် မွှန် နေတဲ့ ကောင် ကို ဘယ်လိုမှ ပြောမရ ပါဘူးတဲ့။
“အချိန်မတော် ဒီကောင ်အိမ်ထဲရောက် နေတာ အိမ် ရှင် တွေ့သွားရင် ရဲစခန်း ပို့ မှာ ကျိန်းသေတယ် အမရဲ့ ၊ ကျတော် တို့ မြန်မာတွေ ကို ဆို နဂိုကမှ နှိမ်ချင် ကြတဲ့ ကြားထဲ ဒီကောင် တွေ လုပ်ပေါက် က မဟုတ်သေးဘူး “ လို့ မင်းမင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
ကဲ ကျမ ပြောပါရောလား ။ ရိုက်ချင် စရာ မကောင်း ပေဘူးလား။ ရွာသူားတို့ ကော ကိုယ့် အိမ်မှာ ခေါ်ထားတဲ့ အိမ်ဖေါ် မိန်းကလေး က ကိုယ် တွေမရှိတဲ့ အချိန် သူ့ဘဲ ကို အိမ်ပေါ် ခေါ်တင် ထားရင် ၊ ညဘက်တွေ မှာ သူခိုးလမ်းပြ လုပ်ပြီး လူစိမ်း ကို အိမ်ထဲ ခေါ်သွင်း ထားတာ သိခဲ့ ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အသာတကြည် ခွင့် လွှတ် နိုင်လောက်အောင် သဘောထား ကြီးတဲ့ သူတော့ မရှိ လောက်ဘူးထင်တယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင် လုပ်ကိုင် နေတဲ့ သူတွေက ပိုပြီး ဆင်ခြင် သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့် လုပ်ရပ်က ကိုယ့် နိုင် ငံကို ကိုယ် စားပြု နေပါတယ်။ မြန်မာတွေ က ဒီ လိုတွေ ပဲ လို့ အပြောမခံရအောင် ၊ ငါးခုံးမ တကောင်ကြောင့် တလှေ လုံး မပုပ်ရအောင် ဆင်ခြင် ရမဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ လုပ်ရပ် ကိုတော့ရှုံ့ ချ မိပါတယ်။
အဲဒီနေ့ ကသူတို့ ဇာတ်လမ်း ကို နောက်မှ သိလိုက် တာနာတာပဲ၊ ကြိုသာသိထား ရင် သူတို့ ပုံတွေ ဓါတ် ပုံ ရိုက်ယူထား လိုက် ပြီး သူတို့မိဘ ဆွေ မျိုး တွေ တွေ့ ပြီး ဆုံးမ လို့ ရအာင်လို့ တခါ တည်း တင်လိုက်ချင် ပါတယ်။
စလုံးကအိမ်ဖေါ်တော့သိဘူးဗျ…..ရန်ကုန်မှာခုတလော တော်တော်ခေတ်ထနေတာတစ်ခုတော့ရှိသဗျို့…. ဘာတဲ့….. အိမ်ဖေါ်တောင် တံခါးပိတ်/တံခါးဖွင့် တဲ့။ တစ်ကိုယ်တည်း လူပြိုကြီးတွေအသုံးတယ်များနေသကိုး….
တံခါးပိတ် ဆိုတာကတော့ မိမိရုံးကပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒိအိမ်ဖေါ်က မိမိအိမ်ကိုလာ…ပြီးရင် အိမ်မှုကိစ္စမှန်သမျှကိုလာလုပ်ပေးရပါတယ်။ ညအချိန်အထိဆိုပါတော့ ….. သူကထမင်းလည်းချက်ပေးတယ်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ အဝတ်လျှော်…အကုန်ပေါ့ဗျာ။ ညရောက်ရင်တော့ သူကညစာစားပြီး သူ့အတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းမှာ အိပ်ပါတယ်။ ဒါပေသည့် သူ့အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တံခါးဖွင့် ပါ….. သူကျတော့ ကိုယ်အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ သူကကိုယ့်အိမ်ရောက်လာပါတယ်။ ပြီးရင် အိမ်မှုကိစ္စအကုန်လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲ………သူကတစ်ခုပိုတာက ညဘက်အိပ်ရင် သူ့အခန်းတံခါးကိုဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒန်…တန့်…တန် …………… မနက်မိုးလင်းမှ ထပြန်ပါတယ်။ ခုတော်တော်ခေတ်ထနေတယ်ဗျာ။
တံခါးပိတ်ရဲ့ လစဉ်ပေါက်ကြေးက တစ်လကို 60,000 ကျပ်လောက်ပေးရပြီး
တံခါးဖွင့်ရဲ့ လစဉ်ကျေးကတော့ တစ်လကို 300,000 ကျပ်လောက်ပေးရပါတယ်။
ပွဲစားနဲ့ခေါ်ရင်တော့6လချုပ်ရပြီး ပွဲခကို တစ်လခပေးရပါတယ်။ ခုဗျာ ရန်ကုန်မှာတော်တော်ကိုခေတ်စားနေတယ်ဗျာ………
(ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရေးတာပါ။ အားမပေးပါ။ )
ကိုဒေးဗစ် ပြောတဲ့ဟာကို ကြားဖူးခဲ့တာ ၃ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ ။
လူပျိုကြီး တွေ ငှားကြတာ များပါတယ် ။ တစ်ချို ့ဆို တစ်ရက် ကို ၂ ယောက် ။ မနက်ဆိုင်း နဲ ့ညဆိုင်း တဲ့ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကတော့ တစ်လမှ ၅သောင်းတဲ့ ။ အခုတော့ အစစအရာရာ တိုးတက်မှုများကြောင့် ၃ သိန်း ဖြစ်နေတာ သေချာပါတယ် ။ အဲ့သီတင်းကိုအတိအကျ များ သိရမလား လို ့ဂေဇက် က ရန်ကုန်သားတွေ ကို မေးမြန်းချင်ပါတယ် ။
အူးပေက စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုပါစို့ ..
ဘာမှ ပူနေနဲ့ ..
ပွဲစားဗိုက်ကလေး ရှိတယ် ..
သူက ရန်ကုန်သားစစ်စစ် … တဲ့ ..
အစ်မ မိုချိုရေ … ကြားရတာ ကြက်သီးထလိုက်တာနော် … ။
ကြောက်စရာကြီးပါလား … မြွေပွေး ခါးပိုက်ပိုက်ထားမိသလို ဖြစ်နေပါပြီ … ။ အိမ်ဖော်နောက်ကွယ်ကနေ … ခေါ်တဲ့လူက .. ရိုးရိုးသားသား ဆိုလျှင် … တော်သေး … ။ အိမ်ဖောက်မယ့်လူမျိုးဆို … အိမ်ရှင်တွေရဲ့အသက်ပါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်နော် …. ။
အိမ်ဖော်တွေ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း သနားစရာအရမ်းကောင်းတယ် … ။ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါ ချိုးနှိမ်ပြီး အိမ်ရှင် မငြူစူဖို့ …. အလုပ်လုပ်ကြရရှာတယ် .. အိမ်ရှင်အပေါက်ဆိုးတာတွေနဲ့ တွေ့လျှင်လည်း … အပြောခံရပြန်တယ် ဒါတင်မကပါပဲ … ညည်းပမ်းနှိပ်စက်တာတွေကလည်း .. လူမဆန်အောင်ရှိနေသေးတယ်နော် … ။
ဒီလို အိမ်ဖော်မျိုးကျတော့လည်း … အတော်လေးကိုရဲတင်းတာပါပဲ … ။ မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တာကို သူမို့မကြောက်မရွံ့လုပ်ရဲတယ် … အချစ်တွေ မွှန်နေတဲ့အခါ … ပြသနာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း မေ့ထားတယ်ထင်ပါရဲ့ … ။ အိမ်ရှင်တွေ မရိပ်မိသေးသရွှေ့တော့ … သူတို့သွားလာနေဦးမှာပါပဲ .. အိမ်ရှင်တွေ သိတဲ့တစ်နေ့တော့ … ပြသနာထတတ်လိမ့်မယ် .. အဲ့အချိန်ကျမှ ..အားကိုးရပါတယ် ထင်နေတဲ့ ချစ်သူ(လူလိမ်)ရဲ့ အထောက်ပံ့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး … ။
ဟိုလူကလည်း လွန်ပါတယ် … အိုးအိမ်ကို စွန့်ခွာလာတဲ့လူတွေကို နယ်ခြားမြေခြားမှာ ဒါသက်သက် အမြတ်ထုတ်တာလို့ မြင်မိပါတယ် … ။ ပြသနာမဖြစ်ခင်တော့ … စားကောင်းကောင်းနဲ့စားထားတာပေါ့ … တစ်နေ့ ပြသနာ တတ်တဲ့အခါ .. လူပီပီသသ ဖြေရှင်းတတ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ် …. ။
မကြားဖူးတာတွေ အမျိုးမျိုးကြားနေရပါလား လောကကြီးရယ် ….
အားပေးသွားပါတယ် … အမ မိုချိုရေ …….
တံခါးဖွင့်ကတော့မသတ်နဲ့ အိမ်တဲ့ အိမ်ဖေါ် မဟုတ်လောက်ဘူး ။ ပသတ်နဲ့ အိပ် တဲ့ အိပ်ဖေါ်ပဲ ဖြစ်လိမ့် မယ် ထင်တယ်။
ဒီက အိမ်ဖေါ် အများစုက သနားစရာပါ။ ယောက်ျားလေးတွေ ဆီက စပွန်ဆာ ယူရတဲ့အဖြစ်က သူတို့ အတွက် မဆန်းသလို အိမ်ထောင် ရှင် မိန်းမ တွေ အမြင်နဲ့ ကြည့် ရင် အမြင် ကတ်စရာကောင်း ပေမယ့် သူတို့ရဲ့နည်းပါးလှတဲ့ လစာတွေ အထီးကျန် မှုခံစားချက်တွေ ကို သိထားပြန်တော့လည်း သနားမိပြန် ရော။ ဒီ ကောင်မလေးရဲ ့လုပ်ရပ်ကတော့ ရဲတင်း လွန်းအားကြီးပါတယ်။
လောကကြီးမှာ မထင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အများကြီးရှပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့အမရာ ……….. မှန်ထှာ……….
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says:
အော် သနားစရာဘဝ တွေပါလားကွယ်ရို ့။
ဒီနေ့တွတ်ပီ ကံမကောင်းပါ
ရန်ကုန်မှာလဲ ဒီလိုအိမ်ဖော်မျိုး တွေ ့ဖူးပါရဲ့ဗျား.
သူတို ့လိုလူမျိုးကို အပျော်လိုက်ကြံတဲ့ စောက်ရူးတွေကိုလဲ အံ့ဩမိပါတယ်..
၂ဘက်လုံးကို တစ်ကယ်ကို အံ့ဩပါတယ်..
အမှုအကျင့် အမျိုးမျိုးပါပဲလား ကွယ်ရို့ ..
ဘာပဲပြောပြော ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်တာတော့ မကောင်းဘူး …
ဒါမျိုး ကကိုယ့် နိုင် ငံမှာတောင် မလုပ်သင့် ပါဘူး။ ဒီမှာကတော့ ပိုတာင် ဆင်ခြင်သင့် ပါတယ်။ ဒီက
လူတွေ က နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားဆိုရင် အပြစ် ရှာ လွယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စသာအိမ်ရှင် တွေသိသွားလို့ ရဲတိုင်ခံရရင် မြန်မာတွေ အတွက် ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်။
တော်ပြီဟေ့ ကိုယ်တိုင်ချက် ဖွတ် ပြုတ် တာဘဲ ကောင်းတယ်
မင်းမင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုသူကိုလဲ အပြစ်မြင်မိတယ်….
ကောင်းကောင်းမနေခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကို တနေ့တော့ ခံကြရဦးမယ်….
အိမ်ဖေါ်သွားလုပ်တယ်ဆိတာ ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
နောက် သူတို့တွေ လွတ်လပ်တော့ ကဲကြ ရောဂါဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပြည် ပြန်လာ
အသိတစ်ယောက်ဆို အိမ်ဖေါ်သွားလုပ် ပြန်လာတော့ နေမှုထိုင်မှုတွေပြောင်းလဲ
ဒီမှာ ရောဂါတော့ မရ လွယ်ဘူး။EP, S pass ,WP တွေ အားလုံး ၂ နှစ်တခါ ဆေးစစ်ရတယ် ။အိမ်ဖေါ်တွေကတော့ ၆ လတခါကို စစ်ရတယ်။ ရောဂါ အတွက် တင် မကဘူး ကိုယ်ဝန် ပါစစ်ရတာ။ ဆေးစစ် ခါနီးရင် ကောင်မလေးတွေ မျက်ကလဲ ဆန်ပြာဖြစ်ကြပြီ။